PEACEFUL PA: May 2010
ဆုတောင်း လို့ရတဲ့ အဖြေများ
၁။ စိတ်နှလုံးထဲမှာ ကိုယ်အလိုကို လုံးဝနေရာမပေးပါနဲ့။ အခက်အခဲအားလုံးရဲ့ ၁၀ ပုံ၊၉ပုံ ဟာ ဒီအချက်ပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ အလိုတော်အတိုင်းလုပ်ဆောင်မည်ဆိုရင် အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ အလိုတော်ကိုသိလာဖို့် လမ်းစလည်းဖြစ်ပါတယ်။
၂။ ပြီးရင် စိတ်ခံစားချက်တွေကို ဦးစားမပေးပါနဲ့။ ပေးရင် မှားပြီမှတ်။
၃။ ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလိုတော်ကိုရှာစဉ်မှာ၊ နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ရှာပါ။ ဒီနှစ်ခုကတွဲထားရမယ်။ ကျမ်းစာမပါဘဲ၊ ဝိညာဉ်တော်ကိုရှာရင် လွဲတော့မယ်ဆိုတာသတိရပါ။ ဝိညာဉ်တော်ကကျမ်းစာနဲ့ ဆန့်ကျင်လေ့မရှိဘူး။
၄။ အရိပ်အခြေကို ကြည့်ရမယ်။ ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျမ်းစာကို ဆက်စပ်ပြီး အလိုတော်ကိုဖေါ်ပြလေ့ရှိပါတယ်။
၅။ အလိုတော်ကိုဖေါ်ပြဖို့ ဆုတောင်းပါ။
၆။ ဆုတောင်းခြင်း၊ ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းနဲ့ အရိပ်အခြေကြည့်ခြင်းအားဖြင့် တတ်နိုင်သလောက် အကောင်းဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်ချရပါတယ်။ စိတ်ငြိမ်သက်ခြင်းရလာရင်၊ နှစ်ခု၊ သုံးခုလောက် ဆက်ဆုတောင်းပါ။ အရေကြီးတာရော၊ အရေးမကြီးတာတွေအတွက်ပါ၊ ဒီနည်းဟာ အမြဲတမ်း ထိရောက်လှပါတယ်။
ဂျော့ခ်ျ မူးလာ GEORGE MÜLLER.
"အရည်ကျို၍ စုံစမ်းခြင်းကိုခံနိုင်သော်လည်း၊ ပျက်စီးတတ်သောရွှေကို စစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းထက်၊ သင်တို့ယုံကြည်ခြင်းကို စစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းအရာသည် သာ၍်မြတ်သည်နှင့်၊ ယေရှုခရစ် ပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါ၊ အချီးအမွှမ်း၊ ဂုဏ်အသရေ၊ ဘုန်းအာနုဘော်အလို့ငှါ ဖြစ်မည်အကြောင်း၊ --" ၁ပေ ၁း ရ
ဒီနေ့ခေတ်အတွက် ဆုတောင်းခြင်းအဖြေအဖြစ်နဲ့ ကြီးမားတဲ့သက်သေတွေလို နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် စိုက်ထူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ Bristol မြို့ Ashley Down မှ ဂျော့ခ်ျမူးလာက " တခါတရံမှာ ဘုရားသားသမီး တချို့ဟာ အသက်ကြီးလို့၊ အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့လို့ဆိုပြီး ကြောက်စိတ်ရဲ့ဆွဲချမှုကို ခံနေကြရတာကို တွေ့နေရပါတယ်။ ခေတ်ချင်း မတူတော့ဘူးလို့ ပြောတတ်ကြတယ်။ ဒါဟာ ဘုရားသခင်ကို အသက်ရှင်တဲ့ ဘုရားလို့ မထင်မှတ်သလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ယုံကြည်အားကိုးသူတွေကို ဒီနေ့ခေတ်မှာလည်း ပစ်မထားတဲ့အကြောင်း ကျွန်တော် လက်တွေ့ပြချင်လာတယ်။
" စီးပွါးရေးသမားတွေကလည်း စီးပွါးရေးလုပ်ရင်း အပြစ်ကို စိတ်မလုံတော့ လောကီသားလိုဖြစ်လာတယ်။ အပြိုင်အဆိုင်လုပ်ရ၊ ကြပ်တည်းတဲ့ကာလနဲ့ ကြုံရ၊ လူဦးရေတိုးပွါးနေတာတွေကြောင့် ကျမ်းစာအတိုင်းသွားလို့ မဖြစ်ဘူးလို့ ဆင်ခြေအဖြစ် ပေးတတ်ကြပါတယ်။ ဘုရားသခင် မပြောင်းလဲဘူး ဆိုတာ သူတို့ မြင်နိုင်တဲ့သက်သေတခု ပြချင်လာပါတယ်။
" နောက်တမျိုးကတော့ ပညာတတ်တွေ။ သူတို့တွေအားလုံးကို ကျမ်းစာထဲကအကြောင်းတွေ ပြောပြရုံမျိုး မဟုတ်ဘဲ၊ ဒီနေ့ခေတ်မှာကို လက်တွေ့ပြချင်တာပါ။ ကျမ်းစာဟာ ကျွန်တော်အတွက် လုံလောက်ပေမယ့်၊ သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကို ထောက်မဖို့ လက်တချောင်းငှါးချင်လာပါတယ်။ ဘုရားသခင်က A. H. Franke အပေါ် ပြုခဲ့တာတွေ သတိရမိလာတယ်။ ဘုရားကိုပဲ အားကိုးတယ်။ မိဘမဲ့ကလေးကျောင်း အကြီးကြီး ထောင်တယ်။ သူ့လိုပဲ လူ့မျက်စိနဲ့ မြင်နိုင်တဲ့ မိဘမဲ့ကလေးကျောင်း ထောင်ချင်လာတယ်။ ဘယ်လူတဦးတယောက်ကိုမှ မတောင်းဆိုပဲ၊ ယုံကြည်ခြင်း၊ ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ပဲ ကျောင်းထောင်ပြီး၊ သယ်ပိုးချင်လာပါတယ်။ လက်တွေ့မြင်ရစေချင်တာကြောင့် ကျောင်းတောင်ချင်ခဲ့တာပါ။ ဆင်းရဲတဲ့ကလေးငယ်တွေကို ပြုစုရာမှာ ဘုရားသခင်အသုံးပြုခံချင်သလို၊ ဘုရားကြောက်တတ်အောင်လည်း သင်ပေးချင်စိတ်လည်း တကယ်ရှိ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဓိကကတော့ ဘုရားသခင် သစ္စာရှိမြဲ၊ ဆုတောင်းတာကို နားထောင်နေမြဲ ဆိုတာကို လူတွေသိစေ၊ မြင်စေချင်တာပါ။ ကျောင်းအကြောင်းဖတ်ရလို့ အပြစ်သားတွေ နောင်တရ ပြောင်းလဲကြသလို၊ ယုံကြည်သူတွေလည်း တိုးတက်လာာကတာကို ၁၈၃၅၊ နိုဝင်ဘာလကတည်းက ဘုရားသခင် သက်သေထူတော်မူ ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဘုရားဘုန်းတော် ထင်ရှားရုံမျှမက၊ ဘုရားသခင်ကို မြင်လာစေနိုင်အောင် ကျွန်တော်ကို မစတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတော် ချီးမွှမ်းပါတယ်။
ဇန်နဝါရီ ၁၆၊ ၁၈၃၆ မှတ်တမ်းအရ-
မိဘမဲ့ကျောင်းစကာစ နှစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲ စိတ်ကူးက ဘုရားသခင်ကြောင့်ဆိုရင် တည်ပါစေ၊ မဟုတ်ရင် ပယ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ မိဘမဲ့ကလေးတွေအတွက် နေစရာ၊ ကျမ်းစာသင်ပေးဖို့တွေ လိုတာမှန်ပေမယ့် ကိုယ့်ကို အဲဒီနေရာမှာ တကယ်သုံးဖို့ အလိုတော်ရှိသလား သိချင်လာပါတယ်။ အလိုတော်ရှိရင်တော့ လုပ်ဆောင်သူရော၊ လိုတဲ့ပစ္စည်းတွေပါ ပေးသနားမှာပဲလို့ ဖြေသာစရာကတော့ ရှိပါတယ်။ ကိုယ်က ဒီအကြောင်း စဉ်းစားလေ့လာဖို့ပဲ။ ပထမနှစ်ပတ်အတွင်း ငွေရော၊ လက်တွဲလုပ်မဲ့သူပါ မတောင်းသေးဘူး။
ဒီဇင်ဘာ ၅ မှာ ဆုတောင်းချက်က ချက်ချင်းပြောင်းသွားတယ်။ ဆာလံ ၈၁ ကိုဖတ်မိတယ်။ အငယ် ၁၀ကို ထိထိတွေ့တွေ့ဖြစ်သွားတယ်။ "သင်၏နှုတ်ကို ကျယ်ကျယ်ဖွင့်လော့၊ ဝပြောစွာကျွေးမည်။" ဒီကျမ်းချက်က ကျောင်းဖွင့်၊ မဖွင့်၊ အလိုတော်သိရုံပဲတောင်းပြီး၊ တခြားဘာမှ မတောင်းရသေးတဲ့အဖြစ်ကို မြင်လာစေ ပါတယ်။ အလိုတော်တော့တောင်းခံတယ်၊ အချိန်အကန့်အသတ်မပါပဲတောင်းခဲ့မိတာပါ။ အိမ်တလုံး၊ ငွေ £1000 နဲ့ လုပ်ဆောင်မဲ့လူတွေတောင်းပါတယ်။ အိမ်အသုံးအဆောင်တွေနဲ့၊ ကလေးအဝတ်အထည်တွေရဖို့ ယုံကြည်သူတွေကို နှိုးဆော်ဖို့ ဆက်ဆုတောင်းပါတယ်။ အသိမိတ်ဆွေတွေထံက ရဖို့ မြော်လင့်မထားပါဘူး။
ဒီဇင်ဘာ ၁၀၊ ၁၈၃၅ - မှာရေးထားတာက-
ဒီမနက် စာတစောင်ရတယ်။ အဲဒီ အကိုနဲ့ အမက "မိဘမဲ့ကျောင်းမှာ ပါဝင်ပါရစေ၊ အရည်အချင်းကိုက်ညီလို့ ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်၊ အိမ်အသုံးအဆောင်တွေလည်း လှူချင်ပါတယ်။ လစာမယူပါဘူး။ ပါဝင်လုပ်ဆောင်ဖို့ အလိုတော်ရှိရင်၊ ကျွန်တော်တို့ကို ဘုရားကျွေးမှာပါ။"
" ညီအကိုတယောက်က အပတ်စဉ် (သို့မဟုတ်) နှစ်စဉ် ပေးလှူမယ်လို့ပြောလာတယ်။ - " ဒီနေ့ အဲဒီ အကိုနဲ့ အမ - မိဘမဲ့ကျောင်းမှာ ပါဝင်ပါလာကြပြီ။ အိမ်အသုံးအဆောင်တွေ ရှိသမျှ လာပေးတယ်။"
ဒီဇင်ဘာ ၁၇-- ညဖက်ကနေ၊ မနက်အထိ စိတ်ဓါတ်ကျနေတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလဲ၊ ခွန်အားပေးဖို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ မကြာပါဘူး၊ ညီအကိုတယောက်က အဝတ်အထည် နှစ်အုပ်၊ ပိတ်အုပ် ၄ အုပ်၊ အခင်းတွေ ယူလာတယ်။ ညနေဖက်မှာ တခြား ညီအကိုတယောက်က အဝတ်အထည်တွေ၊ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းတွေ ယူလာတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ တယောက်သောသူရဲ့ စိတ်ထဲမှာ မနက်ဖန် £100 ပေးလှူဖို့နှိုးဆော်ခံထားရတယ်လို့ ပြောသွားပါသေးတယ်။
ဇွန် ၁၅၊ ၁၈၃၇-- "ဒီနေ့ ပေါင်ငွေ ၁၀၀၀ အတွက် တခါထပ်ကြိုးစားဆုတောင်းပါတယ်။ ဒီညနေ ၅ပေါင် စရလိုက်တာ လိုတဲ့ငွေအကုန်ပြည့်သွားတဲ့အထိ ပါပဲ။ ငွေအားလုံး၊ အဝတ်အထည်အားလုံးနဲ့ အသုံးအဆောင်အားလုံးဟာ လူတဦးတယောက်ကို ဘာတခုမှ မတောင်းပဲရတာပါ။"
တတိယအချက်အနေနဲ့ ခိုကိုးရာမဲ့ကလေးတွေအတွက် မိဘမဲ့ကျောင်းဖွင့်ပြီလို့ ကြေငြာဖို့ မေလမှာ သတင်းစာထဲထည့်တယ်။
၁၈၊ ၁၈၃၆ မှာရေးထားတာက ---
" ကျောင်းသာထောင်မယ်၊ ကလေးတွေရောက်လာဖို့ တခါမှ ဆုတောင်းမိဘူး၊ အများကြီးရောက်လာကြမှာပါ လို့ ထင်ထားတယ်။ ဖွင့်ရက်နီးလာပေမဲ့ ကလေးတယောက်မှ ရောက်မလာဘူး။ ကိုယ့်အထင်ကို ဘုရားသခင် စိတ်ပျက်စေပြီ၊ ဘုရားမပါ ဘာမှမရနိုင်ဘူးဆိုတာကို ပြနေပါတယ်။ အချိန်ကျပေမဲ့ ကလေး တယောက်မှရောက်မလာဘူး။ ဒီ့အရင်မှာ ဘုရားစိတ်တော်နဲ့မဆန့်ကျင်ဖို့ အခါခါကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။နှိမ့်ချစွာ ပြပ်ဝပ်ဖို့ သွန်သင်နေတာပါ။ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၃ မှာ တညနေလုံး ကိုယ့်စိတ်ရင်းကို ပြန်စစ်ကြည့်မိပါတယ်။ ပထမက ဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့၊ ဒုတိယက မိဘမဲ့ကလေးတွေရဲ့ဝိညာဉ်ရေး၊ တတိယက ကျန်းမာရေး။ ကျောင်းသားလာအပ်ဖို့ စိတ်ပါလက်ပါ ဆုတောင်းပါတယ်။ စိတ်အေးသွားပါတယ်။ နောက်တနေ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၄ မှာပဲ ပထမဆုံးကျောင်းသား လာလျှောက်တယ်၊ အဲဒီကနေ ၄၂ ယောက်အထိပါပဲ။ "
နောက်တော့ကျောင်းသား ၁၀၀ နီးပါးရောက်လာတယ်။ ငွေကလည်း ပေါင် ၂၀ အထိလျှော့ကျလာတယ်။
" ဇွန်လိုင် ၂၂ ( ၁၈၃၈ ) -- - ဒီညနေ ပန်းခြံလေးထဲ လမ်းလျှောက်ရင်း၊ ဟေဗြဲ ၁၃း၈ ၊ "ယေရှုခရစ်သည် မနေ့၊ ယနေ့၊ နောင်ကာလ မပြောင်းမလဲ နေတော်မူ၏။" မပြောင်းမလဲတဲ့ မေတ္တာတော်၊ တန်ခိုးတော်၊ ပညာတော် ---- စတာတွေကို စဉ်းစားဆင်ခြင်ရင်း ကိုယ့်ဝိညာဉ်ရေးနဲ့ လက်ရှိတွေ့ကြုံနေရတာတွေကို ဆုတောင်းမိပါတယ်။
ကျောင်းအတွက် လိုနေတာတွေကို ချက်ချင်းစဉ်းစားမိလာတယ်။ သခင်ယေရှုက အခုကျောင်းမှာလိုနေတာတွေကို မေတ္တာတော်၊ တန်ခိုးတော်နဲ့ မစပြီးပြီ။ နောင် လိုမယ့် အရာတွေလည်း ဖြည့်ဆည်းပေးဦးမှာပဲလို့ ပြောဖို့ ချက်ချင်းစိတ်မှာပေါ်လာတယ်။ မပြောင်းလဲတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ သဘောထားကို သိလာတဲ့အခါ အတော်ပျော်မိပါတယ်။ တမိနစ်အကြာမှာ စာတစောင်နဲ့ အတူ ပေါင်ငွေ ၂၀ ရောက်လာပါတယ်။ ရေးထားတာက " ဒီငွေကို ကျမ်းစာလေ့လာကြရာမှာဖြစ်ဖြစ်၊ ကျောင်းဆောက်ရာမှာ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဆုတောင်းရာမှာ ဘုရားသခင်လမ်းပြသလိုဖြစ်ဖြစ် သုံးပေးပါ။ မများပေမယ့် ဒီနေ့အတွက် လတ်တလော သုံးဖို့် လုံလောက်မှာပါ။ မနက်ဖန်မှာလည်း လိုသလောက် မစတော်မူမှာပါ။ -- စသည်ဖြင့် --- " ပါပါတယ်။
" နိုဝင်ဘာ ၂၁- ၁၈၃၈ -- ဒီနေ့လောက် ပိုက်ဆံပြတ်တဲ့နေ့မရှိ၊ ကျောင်းဆောင် ၃ ဆောင်လုံးရဲ ဆရာမကြီးတွေရဲ့ လက်ထဲမှာ တပြားမှမရှိ။ ဒါပေမယ့် ညစာကတော့ ကောင်းပါတယ်။ ဒီနေ့ပြီးရင်တော့ ဘယ်အဆောင်မှာမှ မရှိတော့ဘူး။ တနာရီ အချိန် ဆုတောင်းအပြီးမှာ မစမှုကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ်။ မစတော်မူမှာပါ၊ ဒါပေမယ့် ကြပ်တာကတော့ အမှန်ပေါ့။ ပြန်လာချိန်မှာအေးတော့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ လိုမယ်ဆိုပြီး အနီးဆုံးလမ်းကနေ အိမ်မပြန်ပဲ၊ ကွေ့ပတ်ပြန်ပါတယ်။ အိမ်နားအရောက် ကိုက် ၂၀ အကွာမှာ နောက်ကနေ လမ်းလျှောက်လာတဲ့ လူတယောက်နဲ့ တွေ့ပါတယ်။ စကားနဲနဲပြောပြီး ၁၀ပေါင် ပေးပါတယ်။ တမိနစ်လောက် နောက်ကျရင် သူနဲ့ လမ်းမှာလွဲသွားနိုင်ပါတယ်။ လိုနေတာ ဘုရားသခင်သိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆုံတွေ့စေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
" စက်တင်ဘာ ၂၁- (၁၈၄၀)၊ တနင်္လာ၊ လက်ထဲမှာရှိတာလေးရယ်၊ မနေ့က ရောက်လာတာလေးရယ်ဆိုရင် ဒီနေ့စာထက် ပိုနေပါတယ်။ မနက်ဖန်အတွက်လည်း လောက်ပါတယ်။ ဒီနေ့ ညီအကိုတယောက်က အလိုအပ်ဆုံးနေရာတွေမှာသုံးဖို့ ၁၀ပေါင်ပေးပါတယ်။ ကျောင်းအတွက် ဆုတောင်းနေတာ ကြာပါပြီ။ ကျမ်းစာအုပ်တွေ၊ သာသနာပြုဖို့ အလှူငွေတွေ အတွက်ထည့်လိုက်ပါတယ်။ သူက ဒီမြို့ကို ရောက်ခါစ သုံးရက်ပဲ ရှိသေးတော့ ကျောင်းအကြောင်း ဘာမှမသိဘူး။ ဘုရားကို အားကိုးရင် စိတ်ရှုပ်စရာမရှိပါဘူး။ ပေးလှူဖူးသူတချို့ ခရစ်တော်၌ အိပ်ပျော်ပြီ။ တချို့ အမှုတော်မှာ စိတ်မပါတော့ဘူး။ တချို့ကူညီဖို့ စိတ်ပါနေဆဲပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကူညီဖို့မတတ်နိုင်။ တချို့တော့ ကူလည်းကူချင်၊ တတ်လည်းတတ်နိုင်ကြတယ်။ ကူစရာလည်းရှိ။ ဒါပေမယ့် ဘုရားနှိူးဆော်မှ ရတာ။ လူကိုအားရင် စိတ်ရှုပ်လာမှာ သေချာပါတယ်။ ဘုရားကို အားကိုးရင်တော့ စိတ်ရှုပ်ဖို့ မလိုပါဘူး။ ဘုရားသခင်နဲ့ အတူရပ်တည်ရင်၊ ကောင်းတဲ့အရာတွေ မစတော်မူမှာပါ။
ဆိုးတဲ့ အပြစ်သားတယောက်ရဲ့ ပြောင်းလဲခြင်း
၁၈၄၁၊ မှတ်တမ်းမှာ --- "အမှုတော်ဆောင်တဲ့ သက်တမ်းတလျှောက်မှာ အဆိုးဆုံးလူတယောက် ပြောင်းလဲတယ်လို့ ဒီနှစ်ထဲမှာ ကြားရတယ်။ သူ့မိန်းမနဲ့အတူ ခဏခဏ ဆုတောင်းပေးခဲ့ရသူပါ။ သူ့မိန်းမက ခဏခဏ နှိပ်စက်ခံရလို့ အတော်စိတ်ညစ်နေရပြီ။ မဿဲ ၁၈း ၁၉ ရဲ့ ဂတိတော်အတိုင်း ဆုတောင်းလိုက်ကြတယ်။ " တဖန် ငါဆိုသည်ကား၊ မြေကြီးပေါ်မှာ သင်တို့တွင် နှစ်ယောက်တို့သည် သဘောချင်းတူ၍ ဆုတောင်းလျှင်၊ တောင်းသမျှသောဆုတို့ကို ကောင်းကင်ဘုံ၌ ရှိတော်မူသော ငါ၏ ခမည်းတော်သည် ပေးတော်မူလတံ့။" ဒါနဲ့ပဲ အဆိုးဆုံး လူတယောက် ပြောင်းလဲသွားတာပါ။
ယုံကြည်သူတွေ ကောင်းကြီးခံစားရဖို့ ဆုတောင်းခြင်း
" မေ ၂၅- ကျွန်တော်နေတဲ့ Bristol မြို့က ယုံကြည်သူတွေ ဝိညာဉ်ကောင်းကြီး အရင်ကထက် ခံစားရဖို့ စဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်။ အဖြေရပါတယ်။ အရင်က ဒီလို ကျေးဇူးတရား၊ သမ္မာတရားနဲ့ ဝိညာဉ်တန်ခိုး တခါမှ မရဘူးပါဘူး။
" ဒီဇင်ဘာ ၉၊ ၁၈၄၁ -- အခုဆိုရင် ဒီလုပ်ငန်းဟာ ၆နှစ် ပြည့်ခါနီးပြီ။ လက်ထဲလာပေးတဲ့ အလှူငွေပဲရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနှစ်တနှစ်လုံး လိုတာမှန်သမျှ ဘုရားသခင်ဖြည့်စွမ်းတော်မူခဲ့ပါတယ်။
"ပြီးခဲ့တဲ့ ၃နှစ်အတွင်းမှာတော့ ဒီရက်ဆိုရင် စာရင်းချုပ်ပြီး၊ တရားဟောပွဲတချို့မှာ နားထောင်သူတွေ အကျိုးရှိစေဖို့ တနှစ်အတွင်း ဘုရားသခင်လုပ်ဆောင်ပေးသမျှကို ပြောပြလေ့ရှိပါတယ်။ ပြီးရင် ဒါကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သိစေဖို့ စာစောင်ထုတ်ဝေပါတယ်။ ဒီတခါမှာတော့ စာဖတ်သူတွေကို လှူချင်လာအောင် ဆွဲဆောင်သလိုဖြစ်နေတာကြောင့် စာစောင်ကိုနောက်ကျပြီးထုတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ရပါတယ်။ ယုံကြည်သူတွေရဲ့ အကျိုးအတွက် ရေးလည်းရေးသင့်တယ်ဆိုတော့ ခက်ခဲဆင်းရဲနေချိန်မှာ မထုတ်သေးဘဲ၊ အောင်မြင် ကျော်လွှားပြီးခါမှ ရေးသားပါမယ်။ လူတဦးတယောက်ကို အားမကိုးဘဲ၊ ဘုရားသခင်တပါးတည်းကိုသာ အားကိုးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
" ဒီဇင်ဘာ ၁၈ -- စနေမနက်။ အကြီးအကျယ်လိုနေပြီ။ လက်ထဲမှာ သေတ္တာထဲကတွေ့ထားတဲ့ ငွေအကြွေ ၄ စေ့ပဲရှိပါတယ်။ စာစောင်နောက်ကျထုတ်ဖို့လုပ်ထားတော့ ဘုရားကိုအားကိုးသလား၊ မကိုးဘူး လား စစ်ဆေးတဲ့သဘောပါပဲ။ ဒီဇင်ဘာ ၁၂၊ ၁၈၄၁ ကနေ ဧပြီ ၁၂၊ ၁၈၄၂ အထိ ၄လကြာကာလလောက် ယုံကြည်ခြင်းကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် အစစ်ခံရတဲ့ကာလမရှိတော့ပါဘူး။
ဇန်နဝါရီ ၂၅၊ ၁၈၄၂။ " စာဖတ်သူတွေ စိတ်ထဲမှာ တွေးမိကောင်း တွေးမိမယ်၊ " ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ၊ မိဘမဲ့ကလေးတွေအတွက် ငွေလုံးဝမရှိတော့ဘူး၊ ပါဝင်လုပ်ဆောင်သူတွေမှာလည်း စိုက်ထားစရာဘာမှမရှိ၊ စားချိန်ရောက်ပြီဆိုပါတော့၊ ကလေးတွေအတွက် စားစရာဘာမှမရှိဘူး။"
" ဟုတ်တယ်။ ဒီလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မျိုးမှာ ဘုရားကို အားမကိုးတော့ပဲနေတတ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ဘုရားကို အားကိုးမယ်ဆိုရင်တော့ ဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားလာတော့မယ်။"
" မတ်လ ၉၊ ၁၈၄၂၊ -- တအားလိုအပ်နေတဲ့အချိန်၊ နေ့ကျောင်းအတွက်ရော၊ မိဘမဲ့ကလေးတွေအတွက်ပါ အကူအညီမလာရင် မဖြစ်တော့တဲ့အချိန်၊ ဒီနေ့မှာ Dublin မြို့နားမှာနေတဲ့ ညီအကိုတယောက်က £10 ပေးလာတယ်။ အဲဒီငွေကို နေ့ကျောင်းနဲ့ မိဘမဲ့ကလေးကျောင်းတွေကို ခွဲဝေပေးလိုက်တယ်။ ဒီငွေရောက်လာပုံက တမျိုးလေးပါ။ ။ တအားလိုအပ်နေတဲ့အချိန်၊ ဘုရားသခင်မစဖို့ စောင့်မြော်နေချိန်၊ ဒီမနက် ဘာလာမလဲလို့မြော်နေချိန်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ စာတိုက်မဖွင့်ဘူး၊ ဒီအတွက်ကြောင့်တော့ စိတ်မပျက်ပါဘူး။ စာတိုက်နဲ့ မဟုတ်လည်း ဘုရားသခင်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီတခါတော့ အဲဒီညီအကိုက တိုက်ရိုက် ပို့ပေးပါတယ်။"
မတ်လ ၁၇၊ -- ၁၂ ရက်ကနေ ၁၆ ရက်အတွင်း £4 5s 11½d ရောက်လာပါတယ်။ ဆင်းရဲတာတော့ လချီကြာပါပြီ၊ ဒါပေမယ့် ဒီမနက်ပိုဆိုးတယ်။ ၇ နာရီထိုးပြီးကာစမှာ အိမ်ကထွက်လာတယ်။ ၈ နာရီမှာ နွားနို့ဝယ်ရမှာဆိုတော့ ပိုက်ဆံရှိ၊ မရှိ ကြည့်ဖို့ရောက်လာပါတယ်။ လမ်းမှာ အသနားခံ ဆုတောင်းလာတယ်။ အဖေက သူ့သားသမီးတွေကို သနားသလိုမျိုး သနားဖို့ပေါ့။ မခံနိုင်တဲ့ ဒုက္ခတွေ မပေးပါနဲ့ပေါ့။ ဘုရားသခင်ပေးသနားရင် စိတ်တွေ ကြည်လင်လန်းဆန်းမယ်ပေါ့။ မတတ်နိုင်တော့လို့ အလုပ်ရပ်လိုက်ရရင် ယုံကြည်သူ၊ မယုံကြည်သူ အားလုံးအတွက် မကောင်းဘူးပေါ့။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ဘုရားသခင် ဆက်လက်အသုံးပြုဖို့ မထိုက်တန်ပါဘူးလို့ ဝန်ခံဆုတောင်းပါတယ်။ ဆုတောင်းရင်း ကျောင်းနဲ့ ၂ မိနစ် ခရီးအကွာအဝေးမှာ ဒီလိုမနက်စောစော အလုပ်သွားတတ်တဲ့ ညီအကိုတယောက်ကို တွေ့ပါတယ်။ စကားနဲနဲ အပြန်အလှန်ပြောရင်း ဆက်သွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူက နောက်ကပြေးလိုက်လာပြီး ကလေးတွေအတွက် £1 ပေးတယ်။ ဆုတောင်းတာကို အဲဒီလို ထူးထူးခြားခြား အဖြေပေးပါတယ်။ ဆင်းရဲရင်း၊ ယုံကြည်ခြင်းကို အစစ်ခံထိုက်ပါတယ်။ ကြင်နာတတ်တဲ့ အဖေတယောက်လို ဘုရားသခင်ဟာ အကြင်နာသက်သေတွေ နေ့စဉ် ပြလေ့ရှိပါတယ်။ သူ့ရဲ့တပါးတည်းသောသားတော်ကိုတောင် ပေးခဲ့သေးတာဆိုတော့ အရာရာကို ရက်ရက်ရောရော ပေးနေဦးမှာသေချာပါတယ်။"
ဘုရားသခင်ကိုအားကိုးခြင်းဟာ လူပေးတဲ့ဂတိတွေထက် ပိုကောင်းပါတယ်။
" မေ ၆၊ ၁၈၄၅ -- ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပေါင်း ၆ ပတ်လောက်တုန်းက ငွေအတော်များများရဖို့ မြော်လင့်စရာရှိနေတဲ့ ညီအကိုတယောက်က ရင်းရင်းနှီးနှီး ဆက်သွယ်လာပါတယ်။ ငွေတွေရလာရင် £100 လောက် လှူမယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ Brother Craik တို့ သုံးဖို့လည်းရမယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ရက်တွေသာကြာလာတယ်၊ ငွေက ရောက်မလာဘူး။ ငွေကတော့ အနဲနဲ့ အများ လိုနေတဲ့အချိန်ပါပဲ။ သူ့ငွေဆီ စိတ်ကရောက်ပေမယ့်၊ သူ့ဂတိကို အားမကိုးပဲ၊ ဘုရားကိုပဲ အားကိုးနေပါတယ်။ ဘာမှရစရာမရှိသလိုပဲနေပြီး၊ ဘုရားသခင်ကိုပဲ အားကိုးနေပါတယ်။ အမျိုးသမီးနဲ့အတူ ဆုတောင်းလို့မှ မပြီးသေးဘူး၊ ငွေပို့မယ့် စာတစောင် ရောက်လာပါတယ်။ --- မေ ၅၊ ၁၈၄၅ ။ ဒါဟာ လူပေးတဲ့ဂတိကို အဓိကမထားပဲ၊ ဘုရားအပေါ်မှာ အားကိုးလို့ရလာတာပါ။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး။ နေ့လည် ၂ နာရီလောက်မှာ ရက်ပေါင်း ၄၀ အကြာတုန်းက ဂတိပေးထားတဲ့ ညီအကိုဆီက စာရောက်လာပါတယ်။ သူ့ဂတိအတိုင်း £100 ပေးလှူပါတယ်။ "
၁၈၄၂ ခုနှစ်။ -- -- " ဒီလို အသေးစိတ်ပြောပြတဲ့အတွက် ယုံကြည်သူတွေက မိတ်ဆွေတွေ၊ ဆွေမျိုးတွေ ပြောင်းလဲဖို့ ဆုတောင်းချင်လာဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆုတောင်းတာဟာ ကျွန်တော်တယောက်အတွက်ပဲ၊ ကျန်တဲ့ယုံကြည်သူတွေ မရနိုင်ဘူးလို့ စာတန်က လမ်းလွဲအောင် လုပ်တတ်ပါတယ်။ မိဘမဲ့ကျောင်းတွေ၊ အခမဲ့ကျောင်းတွေ တည်ထောင်ဖို့ လူတိုင်းကို မခိုင်းပေမယ့်၊ လိုတာတွေအတွက် ဘုရားကို အားမကိုးခိုင်းပေမယ့်၊ ယုံကြည်သူတိုင်းဟာ ကိုယ့်ပြဿနာတွေအတွက် ဘုရားကိုအားကိုးနိုင်ပါတယ်။ ဆုတောင်းယုံမျှမက အဖြေရဖို့ပါ မြော်လင့်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်မှာ ယုံကြည်ခြင်းဆုကျေးဇူး the gift of faith ရထားတယ်လို့ မထင်စေချင်ဘူး။ ဒီဆုကျေးဇူးဟာ ၁ ကော ၁၂း ၉ မှာ " အနာငြိမ်းစေတဲ့ ဆုကျေးဇူး"၊ " နမိတ်လက္ခဏာပြတဲ့ ဆုကျေးဇူး"၊ " ပရောဖက်ပြုခြင်း ဆုကျေးဇူး"တွေနဲ့အတူ ဖေါ်ပြထားတာပါ။
ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာ ၁ ကော ၁၂း၉ မှာပြောတဲ့ ယုံကြည်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘူး။ အကြောင်းကတော့ - ၁။ ကျောင်းကကလေးတွေအတွက်လိုအပ်တာတွေရဖို့ ၆၉ နှစ်လုံးလုံး နဲနဲချင်းတိုးလာခဲ့တဲ့ ယုံကြည်ခြင်းပါ။ ယုံကြည်သူတိုင်းမှာရရှိနိုင်ပါတယ်။ မေတ္တာမရှိလျှင် ငါ၌အကျိုးမရှိဆိုတဲ့ " တောင်တွေကိုရွေ့နိုင်တဲ့ ယုံကြည်ခြင်းမျိုး"မဟုတ်ဘူး။
၂။ ကျွန်တော်အပြစ်တွေခွင့်လွှတ်ခံရပြီးတာကို ဘယ်တော့မှ သံသယမဖြစ်ဘူး။ ကောင်းကင်ရောက်မယ်သေချာတယ်။ ကျမ်းစာက ပြောတာတွေကိုယုံတယ်။ ( ၁ ယော ၅း၁ ၊ ဂလာ ၃း၂၆ ၊ တမန် ၁၀း ၄၃ ၊ ရောမ ၁၀း ၉-၁၀ ၊ ယောဟန် ၃း ၁၆ ၊ ---- ) အခက်အခဲကြုံတဲ့နေရက်တွေမှာ ဘုရားသခင်ထံမှာ ခွန်အားယူတယ်။ တန်ခိုးတော်၊ မေတ္တာတော်၊ ပညာတော်အပေါ်မှာ မှီခိုနေရတယ်။ သားတော်အရင်းကိုတောင် မနှမြောပဲ ပေးခဲ့ပြီဆိုတော့ တခြားအရာတွေကို မပေးဘဲနေမလားလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်ပြောရတယ်။ - ရောမ ၈း ၃၂ ၊ အဲဒီမှာ ငြိမ်သက်ခြင်းရပါတယ်။ စားစရာတောင် မလုံလောက်အောင် ပြတ်လပ်နေတဲ့အခါ၊ ကိုယ်ကလည်း မိုင် ၁,၀၀၀ အကွာကိုရောက်နေတဲ့အခါ၊ စိတ်ဝိညာဉ်က ဘုရားနဲ့အတူနေရပါတယ်။ လက်တွေ့ပြဿနာနဲ့ ကိုက်ညီမယ့် ကျမ်းချက်ကို ယုံကြည်ပြီး၊ စိတ်နှလုံးကို ဘုရားသခင်ထံမှာ သွန်းလောင်းထားရပါတယ်။ စိတ်ငြိမ်သက်မှုရမှ ဒူးထောက်ရာက ထပါတယ်။ ကြွားမယ်ဆိုရင်ကြွားလို့ရပေမယ့် ဒီယုံကြည်ခြင်းဟာ တခြားသူတွေမရနိုင်တဲ့ ယုံကြည်ခြင်းမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ဆုကျေးဇူးတမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ပိုက်ဆံတခုထဲ တောင်းနေတာမဟုတ်ပဲ၊ လိုအပ်သမျှကို တောင်းယူနေတာပါ။ ကျွန်တော်နဲ့ မိသားစုအတွက်၊ လုပ်ဖေါ်ဆောင်ဖက်တွေနဲ့ အသင်းတော်အတွက် လတ်တလောလိုအပ်တာတွေ၊ ဝိညာဉ်ရေးလိုအပ်တာတွေအတွက် ဆုတောင်းရပါတယ်။ ယုံကြည်ခြင်းကြီး ရထားပြီဆိုတဲ့ သဘောမျိုး မဟုတ်ပဲ၊ ထပ်တိုးဖို့တောင် ဆုတောင်းနေရတာပါ။ တခုခု၊ ဥပမာ- သော့ပျောက်တဲ့အခါ၊ ချိန်းထားတဲ့သူ ရောက်မလာတဲ့အခါ၊ အဖြေရဖို့ ဆုတောင်းရပါတယ်။ ကျမ်းစာတပိုဒ်ကို နားမလည်တဲ့အခါ၊ ဘုရးသခင်ရဲ့ လမ်းပြသွန်သင်ခြင်းကိုတောင်းခံရပါတယ်။ ကိုယ်မစွမ်းပေမဲ့ စိတ်ဓါတ်မကျပါဘူး။ မ,စဖို့ ဆုပဲတောင်းပါတယ်။ ဒီလိုလူတိုင်းတောင်းနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကို ထူးထူးခြားခြားလူတယောက်လို့ မထင်ပါနဲ့။ အခက်အခဲတွေ့ရင် ဘုရားကိုအားကိုးပါ၊ ဘုရားမ,တာကို တွေ့ရလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဒုက္ခရောက်ရင် ဘုရားနည်းကို စွန့်ပစ်တတ်ကြတယ်။ အဲဒီမှာ ယုံကြည်ခြင်းတိုးပွါးစရာ အစာပြတ်တော့တာပဲ။ အရေးကြီးတဲ့ အချက်တချက်ရှိပါတယ်။ ယုံကြည်ခြင်းခိုင်မာအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ မေးကြတယ်။ အဖြေက --
၁။ " ကောင်းမြတ်စုံလင်သော ဆုကျေးဇူးရှိသမျှတို့သည် အလင်းတို့၏ အဘထံတော်က သက်ရာက်သည်ဖြစ်၍၊ အထက်အရပ်မှလာကြ၏။ ထိုအဘသည် ရွေ့လျော့တိမ်းယိမ်းခြင်းမရှိ။ ပြောင်းလဲခြင်းအရိပ်နှင့် ကင်းလွတ်တော်မူ၏။" ယာကုပ် ၁း ၁၇ ၊ ဆုတောင်းရပါမယ်။
၂။ အထောက်အကူပြုမယ့်နည်းတွေရှိပါတယ်။ ကျမ်းစာကို သေသေချာချာဖတ်ပြီး၊ စဉ်းစားဆင်ခြင်ပါ။ ဘုရားသခင်ကို ပိုနားလည်လာမယ်။ သန့်ရှင်းတော်မူခြင်း၊ တရားတော်မူခြင်းတွေထက် ချစ်ခြင်း၊ သနားခြင်း၊ ကျေးဇူးပြုချင်း၊ တန်ခိုးကြီးခြင်းနဲ့ သစ္စာရှိခြင်းတွေကို ပိုနားလည်လာမယ်။ တကယ်ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာ တကယ်အရေးတကြီး ဂရုစိုက်တာကိုတွေ့လာရမယ်။ ချက်ချင်း မ,စတာကိုတွေ့မြင်လာရမယ်။ ကျမ်းစာဖတ်တော့ ဘုရားကိုပိုနားလည်လာတာပေါ့။ နားလည်တော့ ပိုအားကိုးချင်လာတာပေါ့။ ယုံကြည်ခြင်းတိုးပွါးဖို့ရာ ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဟာ အတော်အရေးပါ ပါတယ်။
၃။ စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားဖို့လည်း အရေးကြီးတယ်။ မဟုတ်ရင် ဘုရားစိတ်တော်နဲ့ မကိုက်ဘူး။ အားကိုးမယ့်လူက ဘုရားကိုစိတ်နာနေစေတဲ့သူ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ စိတ်မလုံရင် အားကိုးစိတ် လျော့ပါးစေတယ်။ ဘုရားကို အားမကိုးရင်၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အားကိုးစေပါတယ်။ ဘုရားကို အားကိုးရင်၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ်နဲ မိတ်ဆွေတွေ၊ အခြေအနေတွေကို အားမကိုးတော့ဘူး။ တခြားဘာကိုမှလည်း အားမကိုးတော့ဘူး။
၄။ ယုံကြည်ခြင်းတိုးပွါးစေမဲ့ ခက်ခဲတဲ့ အခြေအနေတွေကို ရှောင်မပြေးနဲ့။ စစ်ကြောပြီးမှ ခိုင်မာတာပါ။ လူ့သဘာဝက ဘုရားနဲ့ တိုက်ရိုက်မတွေ့ချင်ဘူး။ ဘုရားကိုရှောင်မယ်။ ထာဝရကာလကိုရှောင်မယ်။ ယုံကြည်သူတွေလည်း ဒီလိုပဲ။ ဘုရားကိုရှောင်တတ်တယ်။ အားမကိုးဘူး။ ပြဿနာကိုမရှောင်မှ ယုံကြည်ခြင်းတိုးပွါးလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခက်အခဲတွေ့လေလေ၊ ဘုရားကို ပိုမြင်ရလေလေဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားလက်တော်မြင်ရတော့မယ်ဆိုပြီး၊ အခက်အခဲကို ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလက်ခံရမယ်။
၅။ နောက်ဆုံးအရေးအကြီးဆုံးက ဘုရားကို အခွင့်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်။ ကိုယ်ဘာသာကိုယ် မဖြေရှင်းနဲ့။ လိုအပ်တဲ့ ယုံကြည်ခြင်းကိုပေးမှာပဲ။ ကြင်နာစွာလမ်းပြမှာပဲ။ မထမ်းနိုင်တဲ့ဝန်ကို မပေးဘူး။ ဘုရားကိုမစောင့်ပဲ၊ ကိုယ်ကိုကိုယ် အားကိုးရင်၊ ယုံကြည်ခြင်းအားနည်းလာမယ်။ ဘုရားလက်တော် မမြင်ရပဲနေမယ်။ ယုံကြည်ခြင်းက တိုးလာဖို့လိုသေးတယ်။ ဘုရားကို အခွင့်ပေးပါ။ ဘုရားကို အချိန်ပေးပါ။ "
အစောပိုင်းနှစ်တွေမှာ Mr. Müller နဲ့ သူ့လုပ်ဖေါ်ဆောင်ဖက်တွေဟာ အခက်အခဲတွေ အများကြီး တွေ့ကြရတယ်။ အဲဒီထဲက တချို့ကတော့ -- သူရေးထားတာက --
" ဇွန်လ၊ ၁၈၄၅။ ၇ နှစိလောက် တော်တော်ဒုက္ခရောက်ရတယ်။ လူ ၁၀၀ အတွက်၊ ၃ ရက်စာပြည့်အောင်တောင် လက်ထဲမှာမရှိဖူးဘူး။ စက်တင်ဘာလ ၁၈၊ ၁၈၃၈ နေ့မှာတော့၊ တော်တော်အစစ်ခံလိုက်ရတယ်။ အစမှာ ဆုတောင်းသံကို နားမညောင်းသလိုပဲ။ နောက်မှ မ,စတော်မူတယ်။ ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်တဲ့သဘောပဲ။ ဘုရားကမေ့မထားဘူး။ ပစ်မထားဘူး။
၁၂ ပေါင် အလှူ
" သြဂုတ်လ ၂၀၊ ၁၈၃၈။ ပေါင်ငွေ ၅ ပေါင်ကို ၁၈ ရက်နေ့ကရတာ ကျောင်းမှာလိုတာတွေအတွက် ပေးရတယ်။ ဒီနေ့တော့ တပြားမှမရှိပြန်တော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘုရားသခင်ကို မြော်ကြည့်နေတယ်။ ဒီတပတ်အတွက် ပေါင် ၂၀ မဟုတ်ရင်တောင်၊ အနည်းဆုံး ၁၃ ပေါင်တော့ရှိမှဖြစ်မယ်လို့ သိထားတော့ ဆုပဲတောင်းနေတယ်။ ဒီနေ့ ဆုတောင်းတဲ့အဖြေအဖြစ် ၁၂ ပေါင် ရတယ်။ Clifton မှာနေတဲ့ အမျိုးသမီးတယောက်က ပေးတာ။ သူ့ကိုအရင်က တခါမှ မမြင်ဖူးဘူး။ ကြည်ညိုစရာကောင်းတဲ့ ဘုရားသခင်ဟာ ခွန်အားသစ်ကိုပေးပြန်ပြီ။
အခက်ဆုံးအချိန်ထဲကတခုကို Mr. Müller မှတ်တမ်းတင်ထားတာက --
" စက်တင်ဘာ ၁၀၊ ၁၈၃၈၊ တင်္နလာမနက်။ မနေ့ကရော၊ စနေနေ့ကရော ပိုက်ဆံမဝင်ဘူး။ ဒါဟာကျောင်းကိုသွားပြီး၊ ဆရာ၊ ဆရာမတွေနဲ့ အတူဆုတောင်းဖို့ လိုလာတယ်။ ( အဲဒီထဲမှာ ဆရာတယောက်ကိုတော့ ငွေကြေးအကြောင်း ဘယ်တော့မှမပြောဘူး။ ) အခြေအနေကို ပြောပြတယ်။ အခု ငွေဘယ်လောက်လိုတယ်ဆိုတာပြောပြတယ်။ ခက်ခဲပေမယ့် မ,စမယ်လို့ ဘုရားသခင်ကို ယုံတဲ့အကြောင်း၊ ဆုတောင်းကြဖို့ ပြောလိုက်တယ်။ ဒီလိုပြောရတာက အခုရှိတဲ့ငွေကလွဲလို့၊ တခြားတခုခု ဝယ်ဖို့ငွေမရှိဘူးလို့ ပြောပြချင်တာလည်း ပါ,ပါတယ်။ ဝတ်စရာ၊ စားစရာတွေနဲ့အတူ၊ ဘာမှမလိုရအောင်ထားချင်ပေမယ့်၊ ချို့ချို့တဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့ အိမ်ပဲပြန်လွတ်ချင်မိတယ်။ အဲဒီတော့ အသုံးမလိုတာတွေရှိရင်လည်း ပိုက်ဆံရအောင် ရောင်းဖို့ဖြစ်တယ်။ ဒါက အရေးတကြီးပြဿနာပဲ။ ငွေနည်းနည်းဝင်လာတယ်။ အမည်မသိရဘူး။ ကျွန်တော်အတွက်တော့ ဒါက စရံပဲ။ ဘုရားသခင် သနားပြီ။ ထပ်ပေးဦးမှာ။ ၁၀ နာရီလောက်မှာ ညီအကို Craik ဆီက ရင်ဖွင့်ပြီးပြန်အလာ၊ တခါထပ်ဆုတောင်းနေတုန်း၊ အမျိုးသမီးတယောက်က ကျွန်တော့်ဇနီးသည်ကို ငွေဒင်္ဂါး ၂ ပြားပေးတယ်။ လာချင်ပေမယ့်၊ တော်တော်ကြာအောင် မလာဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလည်း ပြောပြတယ်။ ခဏကြာတော့ အခန်းထဲ ကျွန်တော်ရောက်သွားတော့ ကျွန်တော်ကိုလည်း ဒင်္ဂါး ၂ ပြားထပ်ပေးပါတယ်။ ဒီမှာလိုနေတာကို သူဘာမှမသိရှာဘူး။ ဘုရားက ယုံကြည်ခြင်းကို အားပေးတာပါ။ နောက် ခဏကြာတော့ ယောင်္ကျားလေးဆောင်နဲ့ မိန်းကလေးဆောင်တွေက ပိုက်ဆံလာတောင်းပါတော့တယ်။ "
" စက်တင်ဘာ ၁၇၊ ၁၈၃၈။ -- အခက်အခဲက ရှိနေဆဲပဲ။ ယုံကြည်ခြင်းကို နေ့တိုင်းအစစ်ခံနေရတယ်။ ဘုရားသခင်ကို ဆုတောင်းတတ်အောင် အကြောင်းတွေဖန်ပေးနေတာပါ။ ဘုရားပေးမှာသေချာပါတယ်။ စောင့်ရမှာပေါ့။ လုပ်ဖေါ်ဆောင်ဖက်တယောက်က ပိုက်ဆံနဲနဲလာပေးတယ်။ တခြားတယောက်ကလည်း လာပေးတယ်။ သူက ရှိသမျှ အကုန်ပေးတာ။ ပေးစရာတွေအတွက် ပေးလို့ရသွားတယ်။ ဝယ်စရာတွေလည်း ဝယ်နိုင်သွားတယ်။ ဒီညနေမှာ ငွေက ဒီလိုခပ်နှေးနှေးဝင်လာနေတာက စစ်ကြောခြင်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျမ်းစာဖတ်တော့ ဆာလံ ၃၄ ကြောင့် ခွန်အားရမိတယ်။ လုပ်ဖေါ်ဆောင်ဖက်တွေနဲ့ ဆုတောင်းဖို့ စိတ်ပျော်သွားတယ်။ ဆာလံ ၃၄ ကိုဖတ်ပြတယ်။ သူတို့လည်းခွန်အားရအောင် ပြောပြပါတယ်။
" စက်တင်ဘာ ၁၈၊ -- ဆရာတယောက်ရဲ့ငွေနဲ့ ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ငွေ ပေါင်းပြီး ကလေးတွေအတွက် လိုနေတဲ့ နွားနို့နဲ့ ပေါင်မုန့် ဝယ်ရတယ်။ အဆောင်တဆောင်အတွက်က လဘက်ခြောက်နည်းနည်းနဲ့ အဆောင်အားလုံးအတွက်က နွားနို့ဝယ်ပါတယ်။ လိုသလောက်ပဲ ဝယ်နိုင်ပါတယ်။ ပိုမဝယ်နိုင်ဘူး။ မုန့်က ၂ ရက်စာရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ငွေကပြတ်နေတယ်။ လုပ်ဖေါ်ဆောင်ဖက်တွေကလည်း ရှိသမျှကလေးတွေလည်း ပေးကြပါတယ်။ လန်ဒန်က အမျိုးသမီးတယောက်က ရောက်လာပြီး၊ ကျောင်းဆောင်ဘေးက အိမ်မှာ ၄ ၊ ၅ ရက်လောက်တည်းနေပါတယ်။ ပြီးမှ သမီးဖြစ်သူရဲ့ ငွေနဲ့ အထုပ်တထုပ် လာပေးပါတယ်။ နှမြောစရာ အသုံးအဆောင်တွေ ရောင်းပြီး သုံးနေရတာကို တားတော်မူဖို့ ဆုတောင်းရပါတယ်။ ကျောင်းဆောင်နားမှာ ငွေကရောက်နေပြီဆိုတော့၊ ဘုရားကပေးဖို့ အကြံအစဉ်တော့ရှိပြီးသားပေါ့။ ရောက်မလာတာက ကြာကြာဆုတောင်းစေချင်တဲ့ သဘောဖြစ်ပုံရတယ်။ ယုံကြည်ခြင်းကို စစ်ရင်း၊ အဖြေရတော့လည်း ကြည်နူးစရာဖြစ်စေချင်တဲ့သဘောပါ။ ကျွန်တော်တယောက်တည်းရှိတုန်း ပိုက်ဆံရပြီးတဲ့နောက် အလန့်တကြား ထအော်ချီးမွှမ်းလိုက်တယ်။ ဒီညနေမှာ လုပ်ဖေါ်ဆောင်ဖက်တွေနဲ့ ကျေးဇူးတော်ချီးမွှမ်းဖို့ သွားလိုက်တယ်။ သိပ်တော့မပျော်ကြဘူးပေါ့။ ပိုက်ဆံကို ဒီညနေမှာပဲ ဝေချမ်းရေးလုပ်ကြတယ်။ မနက်ဖန်စာတော့ ရပြီပေါ့။ ။
Posted by Papa at 1:16 PM
Labels: George Muller, ခွန်အားယူစရာ, ဆောင်းပါးတို
QUOTATIONS -- အဆိုအမိန့်
1. What you love and what you hate reveal what you are. ( ကိုယ်ချစ်တဲ့အရာတွေနဲ့ ကိုယ်မုန်းတဲ့အရာတွေက ကိုယ်ဘယ်လိုလူစားဆိုတာပြနေပါတယ်။ )
2. The greatest ability is dependability.
( အကြီးမားဆုံး စွမ်းရည်ကတော့ ယုံကြည်စိတ်ချရခြင်းပါပဲ။ )
3. Never buyacar you can't push. ( မတွန်းနိုင်တဲ့ကားမျိုး မဝယ်နဲ့။ )
4. The second mouse gets the cheese. ( ဒုတိယကြွက်က ဒိန်ခဲစားရတယ်။ )
(ပထမကြွက်က packing paper စက္ကူ ပဲ ဖေါက်ရမှာပေါ့၊ လည်တိုင်း၊ လျင်တိုင်း ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောလိုပုံရပါတယ်။ - Pa )
5. When everything's coming your way, you're probably in the wrong lane. ( အားလုံးစုပြုံပြီးကိုယ်ဆီရောက်လာနေရင်တော့၊ ကိုယ်ကလမ်းကျဉ်းထဲမှာရောက်နေပြီမှတ်။ )
6. A truly happy person is one who can enjoy the scenery onadetour. (တကယ်ပျော်ရွှင်မှုရှိတဲ့လူဆိုတာက လမ်းလွှဲရဲ့ မြင်ကွင်းတွေပေါ်မှာပင် ကြည်နူးးနိုင်သူပါ။ )
7. There are two types of people: Some cause happiness wherever they go; others whenever they go. (လူနှစ်မျိုးရှိတယ်။ ဘယ်နေရာမျိုးကိုမဆို ပျော်ရွှင်မှုဖြစ်စေနိုင်သူနဲ့၊ ဘယ်အချိန်မဆို ပျော်ရွှင်မှု ဖြစ်စေနိုင်သူတွေပါ။ )
8. If you lend someone $ 20 and never see that person again, it was probably wroth it. (လူတယောက်ကို ဒေါ်လာ ၂၀ လောက်ချေးပြီး၊ နောက်မတွေ့ရတော့ဘူးဆိုရင် တန်ပါတယ်။)
9. The school of suffering graduates rare students. ( ဒုက္ခကျောင်းမှာ အောင်တဲ့သူရှားတယ်။ )
10. The one thing worse thanaQuitter is the man who is afraid to begin. ( လက်လျှော့အရှုံးပေးသူထက် ဆိုးတဲ့သူကတော့၊ စကို မစရဲတဲ့သူပဲ။)
11. Gratitude is the loveliest flower that grows in the garden of man's soul; ကျေးဇူးသိတတ်ခြင်းဟာ လူ့စိတ်ဝိညာဉ် ဥယျာဉ်မှာ ပေါက်တဲ့ အလှဆုံးပန်းပဲ။
when gratitude dies on the altar of man's heart, that man is well nigh hopeless.
စိတ်နှလုံးယဇ်ပလ္လင်မှာ ကျေးဇူးတရားသေဆုံးသွားရင်တော့ အဲဒီလူမှာ မြော်လင့်ချက်မဲ့သွားပြီ။
12. Making someone else look bad never makes you look good. – Raymond Barber.
သူတပါးကို အကျည်းတန်စေတာနဲ့ ကိုယ်လှလာမယ်မထင်နဲ့။
13. Wise men never explain their failures.
ပညာရှိသူတွေဟာ ကိုယ်ရှုံးတာကို ဆင်ခြေပေးရှင်းပြလေ့မရှိဘူး။
14. This generation knows everything about life except how to live it.
ဒီခေတ်လူတွေဟာ လူ့ဘဝမှာအရာရာကို အကုန်သိကြတယ်၊ ဘယ်လိုအသက်ရှင်မလဲဆိုတာ တခုကလွဲရင်ပေါ့။
15. If at first you don't succeed, deny you were trying.
စစခြင်း မအောင်မြင်သေးရင် ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်လို့မပြောနဲ့ဦး။
16. Wrong is wrong, even if everyone is doing it;
and right is right, even though no one does it.
လူတိုင်းလုပ်နေစေဦးတော့၊ အမှားဆိုတာ အမှားပါပဲ။
ဘယ်သူမှမလုပ်ဦးတော့ အမှန်ဆိုတာ အမှန်ပါပဲ။
17. People and telephones repeat what they hear, but the telephone repeats it exactly.
လူတွေနဲ့ တယ်လီဖုန်းတွေဟာ ကြားတာကိုပြန်ပြောကြတယ်။
ဒါပေမယ့် တယ်လီဖုန်းကသာ အတိအကျပြန်ပြောပါတယ်။
18. Virtues are learned at Mother's knee; vices, at some other joint.
ကောင်တဲ့အရာတွေကို အမေ့ရဲ့ ဒူးပေါ်မှာ သင်ယူကြရပြီးတော့၊
မကောင်းတာတွေကတော့ အမေ့ရဲ့ တခြားအရိုးအဆစ်တွေဆီက သင်ယူကြတာပါ။
19. Trouble is usually produced by those who are not producing anything else.
ပြဿနာဆိုတာ တခြားဘာတခုမှ အလုပ်မလုပ်တဲ့သူတွေဆီက လာလေ့ရှိပါတယ်။
20. Be slow in choosingafriend; slower in changing. – Raymond Barber.
မိတ်ဆွေရွေးရင် ဖြေးဖြေးရွေးပါ။ မိတ်ဆွေပြောင်းရင်တော့ ဒီထက်ပိုနှေးရပါမယ်။
21. Do rightathousand times, and you may not hear of it once;
do wrong once, and you may hear of itathousand times.
တခါမှားရင်တော့ အခါတထောင် ပြန်ကြားကောင်းကြားရနိုင်တယ်။
22. We see things not as they are, but as we are. – H.T. Tomlinson.
အရှိအတိုင်း မမြင်ကြဘူး၊ ကိုယ်ကြည့်တဲ့အကြည့်အတိုင်းပဲ မြင်နေကြတာပါ။
23. It should not be necessary to blow out the other person's light to let your own shine.
24. Eat crow when it's fresh; it goes down earlier!
ကျီကန်းသားကို လတ်ဆတ်တုန်းမှာစားပါ၊ သူကအပုပ်မြန်တယ်။
25. There are always too many people who reach for the stool when there isapiano to be moved. (စန္ဒယားကြီး မ- ရွှေ့ရမယ့်အချိန်မှာ၊ ခွေးချေသွားကိုင်နေတဲ့သူက အများသား။)
26. The world is not interested in storms you encountered, but did you bring in the ship. (လူတွေက မုန်တိုင်းမိတာ စိတ်မဝင်းစားကြဘူး၊ သင်္ဘောကမ်းကပ်နိုင်သလားပဲ သိချင်ကြတာ။)
27. The brook would lose its song if you to rocks away. (ကျောက်တုန်းတွေဖယ်လိုက်ရင်၊ စမ်းချောင်းရဲ့ သီချင်းသံပျောက်သွားတော့မှာပေါ့။)
28. There are two ways of spreading light: to be the candle or the mirror that reflects it. ( အလင်းဖြန့်နည်း ၂ နည်းရှိတယ်။ ဖယောင်းတိုင်ဖြစ်ရင် ဖြစ်။ မဟုတ်ရင်၊ သူ့ကိုရောင်ပြန်ထုတ်လွှတ်မယ့် မှန်တချပ်ဖြစ်ပါစေ။)
29. Tell me how you treat your parents, and I will tell you how your children will treat you. – D. L. Moody. ( သင့်မိဘကို ဘယ်လိုပြုစုသလဲ ပြောပြပါ၊ သားသမီးတွေ သင့်ကို ဘယ်လို ဆက်ဆံမလဲဆိုတာ ပြောပြနိုင်ပါတယ်။)
30. The measure ofatruly great man is courtesy with which he treats small man. (တကယ်ကြီးမြတ်သူတယောက် ဟုတ်၊ မဟုတ်ဆိုတာဟာ နိမ့်ကျသူအပေါ် ယဉ်ကျေးပျူငှါစွာ ဆက်ဆံမှုအပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။)
31. Not to do what we ought to do is as bad as doing what we ought not to do.-George W. Truest ( လုပ်သင့်တာကို မလုပ်တာဟာ၊ မလုပ်သင့်တာကို လုပ်တာလိုပဲ ဆိုးပါတယ်။)
32. Wherever your heart is, there your feet will soon take you. – Roger Green. (စိတ်ရောက်ရင်၊ ခြေထောက်ပါ ပါတော့မယ်။)
33. Even if I knew that tomorrow the world would go to pieces,
I would still plant my little apple tree and pay my debts. – Martin Luther.
မနက်ဖန်မှာ ကမ္ဘာပျက်မယ်ဆိုရင်တောင်၊ ငါ့ပန်းသီးပင်ပေါက်ကို ဆက်စိုက်ပြီး၊ ပေးစရာအကြွေးကို ဆက်ပေးပါဦးမယ်။)
34. The poorest man is not he who is withoutacent but he who is withoutadream. အဆင်းရဲဆုံးလူဆိုတာ ပိုက်ဆံမရှိတဲ့လူ မဟုတ်ဘူး၊ စိတ်ကူးအိပ်မက်မရှိတဲ့သူပါ။
35. If you would not be forgotten soon as you are dead,
either write things worth reading or do things wroth writing. – Benjamin Franklin.
သေတာနဲ့ အမေ့ခံရတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ရင်၊ ဖတ်ထိုက်တာတွေရေး၊ ဒါမှမဟုတ်၊ ရေးထိုက်လောက်တဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်ပါ။)
36.There are some things that I'd die for,
Other things that I'd fight for that I would not die for,
and still other things that I'd fuss about that I wouldn't fight over.
It's wise to learn to put everything in one of these categories. – Curtis Hutson
သေရဲတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ရှိပါတယ်။
မသေရဲပေမယ့် တိုက်ခိုက်ရဲတဲ့ အကြောင်းအရာတွေလည်းရှိတယ်။
ဘယ်အကြောင်းအရာကို ဘယ်အတန်းအစားထဲထည့်ရမယ်ဆိုတာက သင်ယူရမယ့် ပညာတမျိုးပဲ။
37. We should not judge until we see clearly; and when we see clearly, we will not judge.
ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိမချင်း အပြစ်မတင်သင့်ဘူး၊
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပြီဆိုရင်တော့ အပြစ်တင်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး။
Rock is strong, but iron cleaves it.
Iron is strong, but fire melt it.
Water is strong, but clouds carry it away.
Clouds are strong, but wind drives them.
Wind are strong, but man can resist them.
Fear is strong, but love casts out fear.
Love is strong: love is eternal.
ပန်းချုံအောက်က ရော်ဘင်ငှက်နီကလေး-- The Robin Under the Lilac Bush
The Robin Under the Lilac Bush
ငှက်မျိုးစုံ အစာလာစားတာကို စောင့်ကြည့်ရတာ ပျော်စရာသိပ်ကောင်းပါတယ်။ တနေ့ချင်းမှာကို ငှက်အမျိုးပေါင်း ၁၅ မျိုးလောက် ရေတွက်လို့ရပါတယ်။
တမနက် မိတ်ဆွေငှက်ကလေးတွေကို စောင့်ကြည့်ရင်းနဲ့ အထူးခြားဆုံးဖြစ်ရပ်တခုကို ကြုံတောင့်ကြုံခဲ တွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ ရော်ဘင်ငှက်ကလေး၃ကောင် ခြံထဲအတူပျံလာပြီး ပန်းချုံအောက်မှာ ဆင်းနေကြ တယ်။ တကောင်က ခြံထဲမှာပဲ ခပ်ရှောင်ရှောင်နေတုန်း၊ ကျန်နှစ်ကောင်ကတော့ အစာကျွေးရာမှာ ခုန်ဆွခုန်ဆွလုပ်လိုက်၊ ယက်လိုက်၊ ခုန်ပျံကူးလိုက်၊ အစာစေ့တွေကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း ယက်ထုတ်လိုက် လုပ်နေတယ်။ ဆူဆူညံညံ တစာစာအော်နေတာဟာ တခြားအကောင်တွေကို ချောက်လှန့်တာလို့ ထင်လိုက်မိလို့ လောဘတယ်ကြီးပါလားဆိုပြီး စိတ်ဆိုးမိပါတယ်။
နောက်တနေ့မှာလည်း ငှက်ကလေး ၃ ကောင် ရောက်လာပြန်တယ်။ အရင်လိုပဲ ဆူကြပြန်တယ်။
" ရူးလည်းရူးတဲ့ ရော်ဘင်တွေ၊ တကောင်နဲ့တကောင် မချောက်ပဲနေရင်လည်း ရရဲ့သားနဲ့၊ ငါ ပြင်ပေး လိုက်မယ်၊" လို့တွေးမိပါတယ်။
နောက်တနေ့ သူတို့ရောက်အလာကို ရေပြွတ်သေနတ်တလက်ကိုင်ပြီးစောင့်နေလိုက်ပါတယ်။ အစား လောဘကြီးတဲ့ ငှက်တွေကိုမောင်းဖို့ အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ အဲဒီမှာ ထူးခြားတာတခုတွေ့လာရတယ်။ သူတို့ ပျံတဲ့ပုံက ခဏရပ်ပြီး အကဲခတ်စရာဖြစ်လာတယ်။ ငှက်ကလေးတွေဟာ သတ်မှတ်ပုံစံတခုနဲ့ တိုက်ခိုက်ရေး လေယာဉ်တွေလိုပျံနေတယ်။ တောင်ပံဖျားတွေထိထားကြတယ်။ မြေပေါ်ဆင်းရင် တကောင်က ခပ်ရှောင်ရှောင်ပဲ ပန်းချုံနားမှာနေတယ်။ ကျန်နှစ်ကောင်က အစာဗန်းနားရောက်လာတယ်။ သူတို့ ထပျံလိုက်၊ ယက်လိုက်တာ ထူးခြားလို့ အနီးကပ်မြင်ရအောင် မှန်ပြောင်းနဲ့ ကြည့်လိုက်ပါတယ်။
မီးဖိုချောင်ပြူတင်းတံခါးက ကြည့်တဲ့အခါ အံ့သြစရာတွေတွေ့လာရတယ်။ မြေပေါ်က ရော်ဘင်ငှက်ကလေး ဟာ မျက်စိမမြင်ရှာဘူး။ တဖက်ကွယ်နေတယ်။ တရွေ့ရွေ့သွားတဲ့အခါ ကျန်တဖက်ကလည်း တဝက်က တခုခုနဲ့ ကွယ်နေပုံရတယ်။ ဗန်းထဲကအစာတွေကို တခြားနှစ်ကောင်က ယက်ထုတ်ပြစ်တာဟာ သူတို့အဖေါ် ဒုက္ခိတကလေး စားရအောင်လို့ပါ။ သုံးကောင်လုံး ဝကြတဲ့အခါ ခေါင်းဆောင်နှစ်ကောင်က မျက်မမြင်ရော်ဘင်ငှက်ကလေးကို ဘေးမှာငြင်သာစွာ အတောင်ပံချင်း တဖျတ်ဖျတ်ခတ်ရင်း ပျံဖို့တစာစာ အသံပေးခါ အတောင်ပံချင်းထိထားလိုက်ကြတယ်။
မြင်ကွင်းထဲက သူတို့ပျောက်သွားတဲ့အခါ တကယ်ကန်းတာက ငါပါလားဆိုပြီး ရှက်ရွံ့ အားငယ် သွားမိ ပါတယ်။ သူတို့အချင်းချင်း ပြတဲ့မေတ္တာနဲ့ ဂရုစိုက်မှုကလေးတွေကို အပြည့်အဝနားလည်လာတဲ့အခါ မျက်ရည်ကျမိပါတယ်။ ကိုယ့်ဘဝကိုယ် သစ္စာဆိုမိတယ်။ ကြောက်ရွံ့အားငယ်သူတွေ ပျံသန်းနိုင်ဖို့ ကိုယ်ကျိုးမတွက်တဲ့ မြော်လင့်ခြင်းတွေနဲ့၊ တခြားသူတွေကို အတောင်ပံချင်းဆက်ထားဖို့ သတိထားပါတော့မယ်။ ။
_ Phyllis Simoolke Walk
Posted by Papa at 5:11 PM
Unchanging Love - မပြောင်းလဲတဲ့ အချစ်
Posted by Papa at 5:07 PM
Labels: Reader, Story, ကဗျာ၊ ၀ထ္တု, ဟာသ, ကျောင်းသုံးဖတ်စာ, ဆောင်းပါးတို
ပန်းချုံအောက်က ရော်ဘင်ငှက်နီကလေး-- The Robin Under...